Sahan lagu sameynayo tirada dadka Soomaliyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxmed ayaa maanta furay aqoon isweydaarsi ku saabsan sahanka qiyaasta tirada dadka Soomaaliyeed.
Qabsoomidda siminaarkaan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya iyo san-duuqa Qaramada Midoobay u qaabilsan dadka (UNFPA).
Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya, Saciid Maxamed Cabdullaahi oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in barnaamijka lagu soo bandhigayo sahanka qiyaasta tirada dadka Soomaaliyeed ay soo bilaabatay sanadkii 2012-ka, haatanna ay meel wanaagsan marayso.
“Tababbarkan qiime weyn ayuu u leeyahay dalka, isagoo ka turjumayaa qorshe hawleedkii xukuumaddu soo jeedisay, kaasoo saldhiggiisu yahay in dib loo abaabulo hay’adihii dawladda si waajibka bulshadooda ka saaran u gutaan” ayuu yiri wasiirka qorsheynta Soomaaliya Saciid Maxamed C/llaahi.
“Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay daah-fur sahan tirakoob ee dalka si horudhac ah looga sameeya, xogta hadda la hayaana maahan middii rasmiga ahayd ee dalka, balse waa isku day. Mudane ra’iisul wasaaraha barnaamijkan maanta intii aan wadnay dad baa u dhintay kuwa kalana waa u dhaawacmeen meelaha la tagay badankoodu ma ahan kuwa amni ah ama dawladdu gacanta ku hayso,” ayuu sidoo kale yiri wasiirku.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo hadal kooban jeediyay ayaa sheegay in tani ay ka turjumeyso sida Wasaaradda Qorsheynta ay dadaal ugu jirto inay soo diyaariso qorshaha lagu shaqeynayo saddexda sano ee soo socota, oo uu ku tilmaamay inay guud ahaan dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed, kana shaqeyneyso horumarka dalka.